अन्तरिक्ष यात्री : कसरी बस्छन्, के खान्छन् ? - satkar post
काठमाडौंं : अन्तरीक्ष एउटा कल्पनाको कुरा हो । जहाँ गएर मानिसले बसोबास समेत गरिसकेका छन् । त्यहीँ अन्तरीक्षको यात्रामा के कस्ता खानेकुरा लैजाने ? कसरी बस्ने ? भन्नेबारे थोरै ज्ञान बाँड्ने प्रयास गरिएको छ । आफ्नो मिल्ने साथीहरुसँग एकहप्ताभन्दा धेरै कुनै शि’विरमा बस्ने गरी जानुपर्दा तपाईं के–के लिएर जानुहुन्छ ? यात्रा अवधि भरको लागि खाने खाना, बस्नको लागि आवश्यक सामग्री, लगाउने कपडा र यस्तै अरु । त्यही शि’विर जस्तै हो अन्तरिक्षमा जाने मानिसको यात्रा पनि । सबै झिटिगुण्टाहरु बोकेर गएका मानिसहरुले आफू त्यहाँ बस्ने समयसम्मको लागि खाना पनि सबै लैजानु पर्छ ।
यात्रा अवधिभरको लागि खानालाई बि’ग्रन नदिने भण्डारणको अवधारणा भने पृथ्वीको यात्रा र अन्तरिक्षको यात्रामा केही फरक छ । जहाँसुकैको यात्रा होस् त्यस्तो यात्रामा जाँदा प्रयोग गरेका सामग्रीहरु यात्रा नसकिएसम्म जतन गरेर राख्छौं र फर्किने बेलामा मात्रै सबै कुरा र’द्दीको टोकरीमा फ्याँ’केर आउँछौं । त्यस्तै हुन्छ, अन्तरिक्षमा पनि । पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा जाने समयमा नै उनीहरुले पर्याप्त मात्रामा खानाको पूर्व तयारी गर्ने गर्छन् । त्यहाँ गएर पनि केही खाना त यहाँ जस्तैगरी सामान्य किसिमले खान सकिने खालको हुन्छ । जस्तै, फलहरु अन्तरिक्षमा पनि प्राकृतिक रुपमा नै खान सकिन्छ । तर, त्यसको पनि भण्डारण प्रक्रिया भने भिन्दै छ ।
अरु खानाहरुमा हामीले पानीको मात्रा थप गरेर खानु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ खानेकुरा तताउनको लागि स्पेस स्टेशनहरुमा चुल्हो‘भट्टी’ हरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तरिक्षमा रेफ्रिजरेटर जस्ता सामग्रीहरु पाईंदैन । त्यसैले त्यहाँ खाना ख’राब हुनबाट बचाउनको लागि अन्तरिक्षको खाना भण्डार गर्ने बन्दोबस्त अन्तरिक्षयात्रीहरु आफैंले गर्नुपर्छ । अन्तरिक्षमा पनि के’ट्चप, तोरीका तेलहरु, मख्खन जस्ता खानेकुराहरु लैजाने गरिन्छ । त्यहाँ नुन र खुर्सानी पनि लैजान त सकिन्छ । तर, त्यसको सकेसम्म प्रयोग गर्ने गरिँदैन । अन्तरिक्षमा खुर्सानी जस्ता सामग्रीहरु तैरिने भएकोले त्यस्ता सामग्रीहरुलाई त्यतिधेरै प्रयोग नगरिने ना’साले जनाएको छ ।
अन्तरिक्ष यात्रीहरुले दिनमा तीनपटक खानेकुरा खाने गर्छन् । बिहान, दिउँसो र बेलुका नै उनीहरुले भिटामिन र खनिजको समिश्रण युक्त खानेकुरा खान्छन् । त्यसमा सन्तुलित आहारहरुलाई पनि ध्यान दिइन्छ । अन्तरिक्ष यात्रीको शरीरका लागि क्यालोरीको आवश्यकताहरू केही भिन्न छ । उदाहरणका लागि एक सामान्य महिलाको लागि एक दिनमा पृथ्वीमा २००० क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ भने अन्तरिक्षमा करिब १९०० क्यालोरी आवश्यक पर्छ । जबकि एकजना हट्टाकट्टा वयस्क मान्छेका लागि ३२०० क्यालोरी आवश्यक पर्छ । अन्तरिक्ष यात्रीहरु बढीजसो फलहरुमा बदाम, बदाम बटर खान्छन् । त्यस्तै, कुखुराको मासु, गाईको मासु, समुद्री खाना आदिको धेरै प्रयोग गर्ने गर्छन् । उपलब्ध पेयहरुमा कफी, चिया, सुन्तलाको रस, फल र निम्बु पानी समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
पृथ्वीमा जस्तै अन्तरिक्षमा पनि खाना प्याकेजमा खाने गरिन्छ । जब खानेकुरा सकिनै लाग्छ त्यतिबेला अन्तरिक्षयात्रीहरुले आफ्नो खानाको मात्रालाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ । खानाको मात्रा उडानको लागि सहज हुने किसिमले तयार पारिएको हुन्छ ।
भण्डारणको लागि सहज होस् भन्न खानाबाट पानीको मात्रा ह’टाइएको हुन्छ । तत्काल खाने खानामा पनि खानुअघि पानीको मात्रा ह’टाइएको हुन्छ । बोर्डमा, खाना खानुअघि खानालाई प्रति’स्थापन गरिन्छ । आईटमहरूमा पेय पदार्थहरू (चिया, कफी, सुन्तलाको जुस) समावेश गरिन्छ । खानालाई कोठाको तापमानमा मिलिरहन सक्नेगरी ‘स्थिर ताप’ गराएर राखिन्छ । अधिकतर फलफूल र माछाहरु सजिलो क्यानमा तयार पारेर राखिएका हुन्छन् । तिनीहरुलाई सुख्खा प्लास्टिकका कपहरूमा प्याक गरेर पनि राख्ने गरिन्छ ।
अन्तरिक्षमा कोकोनट, कुकिज आदिको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अन्तरिक्ष यात्रीहरूले किस्ती आकारको भाँडालाई प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्छन् । खानेकुराहरु या त ट्यू’बमा या झोलामा निचो’रेर राख्ने गरिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा रोग ,भोक, शोकको उपमा पाएको कर्णाली खस राज्यको विस्तार देखि नै हाट , बजार जाने परम्परा रहेको थियो...